Google Girazi App: Gadzira Mawiricheya Ziso-Anodzorwa
[dropcap style = "inverted"] Ungaitei neGoogle Girazi? [/ dropcap]
Iyo kambani yakabvunza veruzhinji iwo mubvunzo, iine hashtag #ifihadglass, kubatsira kubatsira vanoedza chirongwa chayo "chekuongorora". Kunyangwe izvo zvikumbiro zvakavharwa, mumwe mainjiniya wemuno kubva Wayway akatumira paGoogle + mwedzi wapfuura zano rinonakidza pamwe nekugona kwehukama: shandisa icho kubvumira panyama remara vanhu kudzora kwavo mavhiripu kushandisa maziso avo chete.
Akanyora Wayfair's Steve McHugh:
#ifihadglass Ini ndaizoshandisa tekinoroji yekutevera yeziso yakatsanangurwa muUS patent 8,235,529 kuita chirongwa cheMasters robotic lab chirongwa cheimwe quadriplegic uye imwe remara vanhu kudzora kwavo mawiricheya anofambiswa (kutanga / kumira, kumhanya, kutendeuka) uchiratidzira chaiyo-nguva mhinduro pamusoro penzvimbo yavo (njodzi, zvipingamupinyi, nzira dzakarongedzerwa).
Kubva paakatanga kutumira zano, McHugh akashanda neUI dhizaini kuti aichenese. Kunyangwe akawanda emashoko acho ari ekufungidzira, zvichitarisirwa kune zvisina kusimbiswa ruzivo rwekuti Magirazi anoshanda sei, McHugh akanyatsofungisisa kunyatsoita izvi. Ndakamukumbira pamusoro peemail kuti atsanangure zvakawanda nezvekwakabva pfungwa iyi pamwe nekuronga kwake kuita.
Wakauya sei nezano iri?
Pfungwa yeprojekti yangu yakabva kukirasi ye robhoti yandakatora ndichipedzisa Masters angu muMechanical Engineering paTufts University. Zvechirongwa chekirasi, rimwe remapoka akavaka software yekutevera maziso uye zvishandiso zvekutevera maziso. Vakaita izvi na kushandisa kamera yewebhu kutonga mota dzemota diki yerobhoti nechinangwa chekushandisa tekinoroji iyi kune a wiricheya. Gare gare, Tim Roberts, mutungamiri weboka akakwanisa kubatanidza tekinoroji yake nemagetsi wiricheya sechikamu cheMukuru wake Capstone.
Apo mubatsiri pamwe nasachigaro wekambani yangu, Wayfair, akakurudzira isu tese kuti titumire mazano emakwikwi eGoogle Explorer, pfungwa yekutanga yakapinda mumusoro mangu yaive iyo tekinoroji yakavakirwa muGoogle Girazi inogona kuunza chirongwa icho upenyu neimwe nzira zvachose. Ini ndakakurumidza kuongorora kana ndaive ndakarurama mukufungidzira kwangu kuti Google yaizovaka-kutarisa-kuona mumudziyo wavo ndikawana US patent 8,235,529 iyo yakasimbisa iyo fungidziro. Yehunyanzvi yakagadziriswa yekutarisa-maziso pasuru yakapihwa neGoogle yakabvisa chimwe chezvipingamupinyi zviviri zvikuru zvandakaona kuchirongwa chaTim chichiitika. Yangu purojekiti inozokwanisa kushandisa rakakwidziridzwa zvakanyanya uye nehunyanzvi hwekuteedzera maziso raibhurari. Chipiri chipingamupinyi chikuru kune dhizaini yekutanga kuvharidzira kunoonekwa kwemidziyo yekutevera maziso. Google Girazi haringobvisi chete kudiwa kwekuvhiringidzika senge ipfungwa yekutanga, asi zvakare inobvumidza yekuwedzera mumhinduro kumushandisi nezve zvakapoteredzwa. Google Glass ichaita ipa inonakidza interface yeiyo zvinodzora wiricheya nekupa GUI yekufukidzira mune chaiyo-nguva pamusoro pegirazi.
Iwe unogona kutsanangura zvishoma nezve tekinoroji yekutevera yeziso uye kuti unoiona sei ichishandiswa mune ino mamiriro?
Kunyangwe ini ndisingazive zvakawanda nezve chaiyo yeiyo tekinoroji yekutevera maziso kusvikira ndawana mukana weGlass API, iyo patent yakapihwa neGoogle (US 8,235,529) inoratidza kuti pachave nekuteedzera chaiko kwekufamba kweziso rekurudyi maererano nezvinhu zvinoratidzwa mukati mutsara wekuona wemushandisi. Iyi nhanho yechokwadi ichaita zvinogoneka kuti ushandise mushe zvinyoronyoro maziso kuti usarudze zvinodzora zvinoshandura kumhanya nekutungamira kwechigaro kana mushandisi akatarisa pane bhatani kwenguva yakatarwa yenguva. Chii chinotora nguva yakakosha yenguva ichada kutemerwa kuburikidza nekumwe kuyedzwa, asi ichave inopfuura iyo nguva yenguva iyo mumwe munhu angangotarisa kupfuura bhatani uye isingasviki pane imwe nguva inokanganisa iyo kugona kuchinja mushe kubva kudivi kuenda kune imwe kana kubva pakumhanyisa kumhanya kusvika pakudzora pasi. Google Glass gadziriso yemunhu ingangoita zvinopa nhungamiro yenguva. Kugona kuvimba nemaziso ezvakavanzika emabhatani-senge kudzora kunotibvumidza kuti titeedzere kune kwakanyanya maziso maziso, pamwe nekuvhara ziso zvese pamwechete kwenguva yakakosha yenguva, kuronga muchirongwa chinodarika senge yekumira kwechimbichimbi.
Ko zvakadii nezvemufananidzo wauinaro wezvekutaridzika UI. Unogona kutaura neni kuburikidza nezvandiri kutarisa uye kuti mashandiro acho ndeapi?
Iyo UI chifananidzo chakanamatira kumakwikwi angu chikumbiro ipfungwa yakaoma kwazvo nezvekuti mushandisi angafambidzane sei neadzviviriro. Izvo iwe zvaunoona kumusoro kwepamusoro iro kadhi rinoshandiswa kudzora kumhanya kweiyo wiricheya. Ini ndashanda neUI dhizaini kubvira ipapo kuti iterate pane iyo nzira yekuwedzera uye kuronga izvo izvo UI zvingaite senge. Parizvino ichiri mumatanho epfungwa sezvo isu tichipotsa iro Girazi GUI Raibhurari iyo inogona kunge iri chikamu chegadziri kit. Kana izvo zvaburitswa mabhatani auri kuona angangotsiviwa neyakajairika interface zvinhu. Iwo ekutanga mashandiro pane iwo mufananidzo pazasi ndiwo mabhatani ari kumusoro ayo anotendera iwe kuti uwedzere, udzikise kumhanya kweiyo wiricheya kana kuimisa zvachose. Pazasi kurudyi ibara remamiriro ekurega mutasvi azive kumhanya kwavo kwazvino uye kuti iri kukurumidza, kudzikamisa kana kugara nguva dzose. Pazasi kuruboshwe chiratidzo chebhatiri chechigaro chaicho uye inopa fungidziro yemabhatiri akasara pachigaro. Chinhu chekupedzisira chandakawedzera ndicho chipingaidzo uye kuona nzira. Mushini unokwanisa kuona zvingangoita zvipingamupinyi munzira senge makomba kana zvinhu zviri munzira uye nekuzivisa mushandisi.
Chero chimwe chinhu chaungade kuwedzera?
Ndiri kufara chaizvo nezve chirongwa ichi. Chiroto changu chepamusoro ndechekuti Google yaigona neimwe nzira kundisarudza kubva kuzviuru zvekutumira uye kuti ini pakupedzisira ndaizokwanisa kushandura ichi chive chigadzirwa chaicho neimwe nguva gore rinouya. Ini ndinofunga kunyorera zvekurapa zveGoogle Girazi zvakakura uye kunyangwe pane runyerekupe $ 1500 Google Girazi ingangoita upenyu-kuchinja yequadriplegics uye kunyange akaremara, vachisunungura maoko avo kuti vaite mamwe mabasa. Ini ndinotarisira chaizvo kuti chirongwa ichi chichava chaicho kubatsira chero munhu anogona kubatsirwa kubva kune yekuwedzera yekudzora nzvimbo kuvandudza hupenyu hwavo.
Yekutanga Chinyorwa naWalter Frick kubva kuBostInno
9 makore Anyore Munyori Anonyora Bhuku revana muWheelchair